Nguvo Bhegi Fekitori | China Garment Bag Vagadziri, Vatengesi
Wholesale Yakagadziriswa Kudhinda Logo China Kushambadzira ...
Bolsa de Alimentos Zipper Yakachena Lunch Nzvimbo Bhegi Ins ...
Bolsas De Regalo Yakareba Bata Grocery Bhegi Ruvara Co ...
Stock Yekusimudzira Makara Asina kurukwa Tote Yekutenga Bhegi
Custom Zipper asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Suit Cloth ...
Zipper Pink Bhuruu Nonwoven Thermal Bhegi Bvisai Mugungwa ...
Canvas bhegi bundle muhomwe fashoni yekotoni dhizaini b ...
Yakasarudzika Rakajeka Hushamwari Eco Nhema Joint Inodhonza ...
Munhu zvichienderana Custom yepamusoro fashoni donje canv ...
Drawstring bhegi yakasikwa ruvara isina chinhu donje dhizaini ...
Eco-Shamwari Tambo Yegorosi Chipo Bhegi Drawstri ...
Yakasarudzika Drawstring bhegi yakasarudzika chipo chekuchengetedza dra ...
reusable organic grocery kunotenga eco hushamwari 100% ...
12oz Heavy Duty Eco Travel Bags Mukati Brand Label G ...
Cheap 100% Cotton Canvas Shopping Tote Bag pamwe Guss ...
Custom Logo hombe reusable kunotenga zvikwama Tote pamwe R ...
Grocery kunotenga eco-ushamwari 100% donje kanivhasi tot ...
Logo-Dhinda Organic Cotton Canvas Mucheka Blank Tote B ...
Yakasarudzika Zipper Yakapetwa Isina Yakarukwa Yakapetwa Sutu Yekupfekedza Bhegi Nhema Polypropylene Isina Yakarukwa Nguo Bhegi Wholesale
Premium Chinyorwa: Aya mabhegi ehembe akagadzirwa nedziviriro yezvakatipoteredza Isina-rakarukwa Mucheka neyakaomarara-isingadziviriri, isina mvura, inopfava, uye inofema. Iyo yakavakirwa kugara uye inovimbisa kuchengetedza nguo dzako nguva dzese.
Dzivirira paGuruva: Aya mabhegi ehembe anofema asi chengetedza zvipfeko zvakaita semabhachi emvere uye majaketi eganda zvakachengetedzwa uye kuchengetedzwa. Zvinodzivirira zvinosvibisa zvakajairika zvakaita seguruva, vhudzi rechipfuwo, kuratidzwa kwechiedza, hunyoro, hunyoro kana chakuvhe kubva kuzvipfeko zvinokuvadza.
China isina kuruka sutu bhegi vagadziri sutu inodzivirira bhegi ine logo
Premium mhando yakagadzirwa kubva kune-isina kurukwa polypropylene zvinhu, 100% Eco-Inoshamwaridzika & Inogadziriswazve
Yakakwana yekuchengetedza kana kurongeka kwematehwe, furs, tuxedos, masutu, uye madhirezi.
Inofema uye isina acid-isina chinhu kwenguva yakareba - inodzivirira kubva kuforoma
Chena jasi bhegi yemurume sutu yekuvhara bhegi, foldable nguvo bhegi yesutu
Chinyorwa: Yakagadzirwa neye isina-yakarukwa machira zvinhu, zviri nyore kuchengetedza nekutsvaga. Size: Yakasarudzika (L * W * H)
Inodzivirira mbatya: Inodzivirira mbatya kubva kune tsvina, guruva, uye zvipfukuto, inochengeta mbatya dzakachena.
Zipper Dhizaini: Shandisa zipi refu, zviri nyore kutora, uye isa mbatya. Zvinotakurika: Huru hunyanzvi, hunoshanda kwazvo, kutarisira kwakanaka kwembatya.
fekitori mutengo HAPANA MOQ bhegi bhegi rine homwe, yakasarudzika sutu bhegi remuchato rokwe bhegi
Yakareba Kupfeka Hangu Bhegi: Aya mabhegi ehembe yenguo refu akagadzirwa nemhando yepamusoro yekufema asidhi-isina 100GSM Isiri-yakarukwa jira. Dzivirira mbatya dzako kubva pane zvipfukuto neguruva, Chengeta mbatya dzifemeruke uye dzakachena musutukezi, mawadhiropu, kana dzimba dzekuchengetera
Bvisa Window: Iwindo rakajeka rinobvisa fungidziro yekuyedza kuona zviri mukati mehombodo yako ye60-inch nguo. Iye wePurasitiki PVC ID kadhi kadhi yehembe yehembe yezita reti kana kadhi rekuzivisa. Yakanaka uye Nguva-yekuchengetedza.
Cotton kanivhasi yenguo bhegi ine logo
1. Yakagadzikana Hutano Cotton Canvas Mucheka
2. Mufashoni kuchengetedza
3. Spot inogona kugezwa
4. Kuchengeta kusina guruva
5. Zipper yakasimba